Meydadka marxuumiinta lagu dilay Muqdisho oo loo wado madaxtooyada | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Meydadka marxuumiinta lagu dilay Muqdisho oo loo wado madaxtooyada
Banaabaxayaal u badan dhalinyarada kaxeysa mooto Bajaajka ayaa maanta magaalada Muqdisho ka dhigaya dibadbaxayo waa weyn oo ay kaga soo horjeedaan dilalka joogtada ah ee ciidamada dowladda ku hayaan dhalinta ku shaqeeysata Mooto Bajaajta.
Dhalinyaradan ayaa meydka labo wiil oo saakay ciidamada dowladda ku dileen isgoyska Howl-wadaag ee Gobalka Banaadir waxey sheegeen iney geyn doonaan Madaxtooyada kuwaa oo imika wada meydka una dhaqaaqay dhanka madaxtooyada sida dad goobjoogyaal ah inoo xaqiijiyiin.
Isgoysyo dhowr ah oo dhaca magaaalada Muqdisho ayey ka socdaan dibadbaxayada waxaana dhalinyarada ay gubayaan Taayaro iyagoo jidadka xeraya.
Askarta dowladda ayaa Sanadkan kaliya dishay in kabadan 10 dhalinayo oo ku shaqeesta Mooto Bajaajta, waxaana meesha kabaxday cadaaladdi iyadoo inta badan ay baxsadaan askarta dilalka u geesata dhalinyarada.
Bishii Maarso ee sanadkan sidan oo kale wiil dhalinyaro ah ayaa lagu dilay dagmada Waaberi oo ku shaqeysanayay Mooto Bajaaj waxaana dilkaasi mas’uul ka ahaa sarkaal katirsan ciidamada Booliska.
Duqa Muqdisho oo dhacdadaasi kala hadlay dhalinyarada ayaa sheegay in mar dambe sidan oo kale dhici doonin cadaaladdana la horkeeno deeno askarigii dilka geestay, balse hadalkiisu noqday qowda maqashii waxna ha u qaban.